सामाजिक सञ्जालमा भेटिएको एउटा कथा : जुन पढ्दा आँशु नै झर्छ - Nepali Online News Media-shikharnews.com
२०७५ चैत २० बुधवार
एक युवक काम खोज्ने सिलसिलामा एउटा कम्पनीमा पुगे । प्रारम्भिक परीक्षा र अन्तरर्वार्ता सफलतापूर्वक पास गरेपछि निणार्यक अन्तवार्ताका लागि उनलाई कम्पनी डाइरेक्टरकहाँ पठाइयो ।
डाइरेक्टरले उनको वायोडाटा हेरे । उत्कृष्ट थियो । उनले सोधे, स्कूल कलेजमा तपाईले कुनै छात्रवृत्ति पाउनुभएको थियो ?
युवकले जवाफ दिए- थिएन ।
त्यसोभए तपाईका बुबाले तपाईको पढाइको खर्च आफैं बेहोर्नुभयो ।
मेरो बुबा त विश्वकर्मा हो सर । वहाँको आफ्नै आरन छ, त्यहीँ काम गर्नुहुन्छ ।
डाइरेक्टरले युवकलाई आफ्नो हात देखाउन भने । युवकले दुबै हात डाइरेक्टरको टेबलमाथि राखेर हत्केला देखाए । हात सुन्दर, नरम र सुकिला थिए ।
तपाईले बुबाको काममा सघाउने गर्नुभएको छ ?
छैन । वहाँ मलाई सधैं धेरै पढ मात्र भन्नुहुन्छ । फेरि बुबाको काम म जान्दिनँ पनि । वहाँ नै म भन्दा राम्रो काम गर्नुहुन्छ ।
उनी घरतिर हुत्तिए र बुवालाई पर्खेर बसे । जब बुवा घर आए, तब उनले बुबासँग हात धोइदिन मागे । बुवा छक्क परे । अक्मकाए । अनि केही असहज मान्दै आफ्ना दुबै हात छोराका अगाडि राखिदिए ।